Ukuthengisa kubabukeli bePlatform | Martech Zone
I-88% yabantu baseMelika banobuncinci izixhobo ezi-2 ezixhumeke kwi-intanethi kwaye ama-90% amaMelika asebenzisa izixhobo ezininzi ngokulandelelana imini yonke. Kubathengisi, oku kubonelela ngomceli mngeni kunye nethuba lokulungelelanisa kunye nokuhluthisa abalamli apho abaphulaphuli bekhona… ngelixa beqinisekisa ukuba basebenzisa amandla esixhobo banxibelelana naso.
le infographic evela kwiUberflip Sijonga iinyani- zeziphi iinkcukacha zabantu ukuba zeziphi izixhobo, ukuba zichitha ixesha elingakanani kuzo, kwaye zithini iingcali- ukuze ukwazi ukuziqhelanisa kwaye ugungqise isicwangciso sakho somxholo oshukumayo. Ngena ngaphakathi kwaye ugcine uskrolela ezantsi ukuze ujikeleze iziphumo zethu eziphambili.
tags: Umthetho oyilwayoiqonga elinqamlezileyoukwenza imisebenzi emininziisixhobo sokwenza imisebenzi emininziGoogle +UHeidi CohenImithombo yeendaba eshukumayoNeal mohanUkubukela itvuberflip
Ikamva eliqaqambileyo leNtengiso